Wi-Fi သူခိုး Detector - ငါ့ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲထောက်လှမ်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » Wi-Fi သူခိုး Detector - ငါ့ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲထောက်လှမ်း
Wi-Fi သူခိုး Detector - ငါ့ Wi-Fi APK ကိုသုံးပါကိုအဘယ်သူထောက်လှမ်း
Wi-Fi သူခိုး Detector - ငါ့ Wi-Fi & Internet Security ကိုသုံးပါကိုအဘယ်သူထောက်လှမ်းငါ၏အ Wi-Fi ကိုသုံးပါကိုအဘယ်သူထောက်လှမ်းနှင့်ငါ့ wifi လုံခြုံရေးနှင့်အင်တာနက်လုံခြုံရေးကာကွယ်ပါမှအစွမ်းထက် Wi-Fi ကာကွယ်ပေးသူနှင့် Wi-Fi blocker / Wi-Fi သူခိုး blocker ဖြစ်ပါတယ်။တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့အ wifi network ကိုမြန်နှုန်းကိုခိုးယူလျှင်သင်သိသလား?
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပါနှင့်သင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲငါ၏အ wifi နဲ့ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ဘယ်သူကသိသလား
အိမ်နီးချင်းများကသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ access ကိုရှိစေခြင်းငှါလျှင်သင်သိသလား?
တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ connection ကိုနှေးကွေးအခါငါ့အ wifi ကိုခိုးယူခြင်း, အဘယ်သူသည်ငါ့အ Wi-Fi ကို download တစ်ခုခုပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်လျှင်သင်သိသလား?
Wi-Fi သူခိုး Detector - ငါ့ Wi-Fi & Internet Security ကိုသုံးပါကိုအဘယ်သူထောက်လှမ်း အလွယ်တကူငါ၏အ wifi scan နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို tplink / tplink Router က, dlink Router က, netgear router သို့မဟုတ် Huawei Router ကအဖြစ်သင့်ရဲ့ wifi router ကိုချိတ်ဆက်ထားပြီးလူမည်မျှသို့မဟုတ် devices တွေကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်
Wi-Fi သူခိုး Detector - ငါ့ Wi-Fi & Internet Security ကိုသုံးပါကိုအဘယ်သူထောက်လှမ်း တစ်ဦးသင်သည်ငါ၏ wifi ပေါ်မှာသင်တို့သည်လည်းငါ၏ wifi router မှ router ကို setting တွင်သူခိုးပိတ်ဆို့နိုင်သူ detect လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုသောအရိုးရှင်းဆုံးကွန်ယက်ကိုစကင်နာ, ip စကင်နာများနှင့် Wi-Fi Scanner ကိုဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုခြင်း Wi-Fi သူခိုး Detector - ငါ့ Wi-Fi & Internet Security ကိုသုံးပါကိုအဘယ်သူထောက်လှမ်း, စက္ကန့်အတွင်းသင်က IP ကို, MAC ID နှင့်ရောင်းချသူစာရင်းနှင့်သင်၏ wifi router ကိုချိတ်ဆက်မည်မျှနှင့်သည့်ကိရိယာများကိုငါသိ၏။
Wi-Fi သူခိုး Detector - ငါ့ Wi-Fi & Internet Security ကိုသုံးပါကိုအဘယ်သူထောက်လှမ်း အစဉ်ငါ့ wifi router ကိုပေါ်မှာရှိသမျှချိတ်ဆက် devices များတွေ့ပါ !! ငါ၏အ wifi ကိုအသုံးပြုပြီးသူ Check !!
Wi-Fi သူခိုး Detector - ငါ့ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲထောက်လှမ်း သင်သည်မည်သည့် Router modems (192.168.1.1 သို့မဟုတ် 192.168.0.1 စသည်တို့ကို) ၏ wifi router ကိုစာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကူညီပေးသည်။ သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ admin ရဲ့စာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်နှင့်သင့် router ကို setting များကိုပြောင်းလဲမှုများစေနိုင်သည်။
Wi-Fi သူခိုး Detector - ငါ့ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲထောက်လှမ်း လူကြိုက်အများဆုံး wifi router ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးထားတယ်။
သင့်ရဲ့ wireless network ကိုကန့်သတ်မည့်အစီအစဉ်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုဒေတာပေးပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်လျှင်ဒါ, အခမဲ့အဘို့ဤ Wi-Fi မော်နီတာ & Internet Security app ကို install နှင့်သင့် Wi-Fi ချိတ်ဆက်သံသယဖြစ်ဖွယ် device များအတွက်ကြည့်ရှုပါ။
Wi-Fi သူခိုး Detector အသုံးပြုခြင်း - သင်ပြုနိုင်သည်အောက်ပါငါ့ Wi-Fi & Internet Security ကိုသုံးပါကိုအဘယ်သူထောက်လှမ်း:
သင့်ရဲ့ Wi-Fi လုံခြုံရေး & Internet Security Protect
ငါ၏အကွန်ယက်ပေါ်တွင် whos detect
တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ wifi အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကပြောပြရန်မည်သို့မည်ပုံ
ငါ၏အ wifi ကို download အပေါ်သူသည် detect
သင့်ရဲ့ wifi အပေါ်သောသူသည်ကြည့်ဖို့ဘယ်လို
တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ wifi ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသိရန်
ငါ၏အ wifi သုံးပြီးသူကိုမြင်ရဖို့ဘယ်လို
တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့အ wifi အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကစစျဆေးဖို့ဘယ်လို
ငါ၏အ wifi အပေါ်သောသူသည်
ငါ၏အ wifi ကိုအသုံးပြုပြီးသူ
ငါ၏အ wifi သုံးပြီးသူကိုစစ်ဆေးပုံကို
အဘယ်သူသည်ငါ့အ wifi ကိုအသုံးပြုသည်
wifi သူခိုး Finder
ငါ၏အ wifi အန္တိမအပေါ်သောသူသည်
သင့်ရဲ့ wifi ကိုအသုံးပြုပြီးသူစစျဆေးဖို့ဘယ်လို
ငါ၏အ wifi အတွက်သူကို
- အဓိကစာမျက်နှာ Upgrade နှင့်အင်တာဖေ့စတင့်တယ်
- Wi-Fi သူခိုးထောက်လှမ်း Add
- ငါ့ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲ Add
- Wi-Fi Scanner သမိုင်း Add
- Wi-Fi လုံခြုံရေး settings Add
- လျင်မြန်စွာ Wi-Fi Scanning ကို Add
Wi-Fi သူခိုး Detector - ငါ့ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုပါကဘယ်သူလဲထောက်လှမ်း
5.87 ကို MB
Wi-Fi Hacker Detector - Wi-Fi Router Manager ကို